1.Back ilaa qoraalada ee iCloud
2.Back ilaa qoraalada ee Gmail
3.Back ilaa qoraalada ee Lugood
4.Backup qoraalada ee WordPress
5.A barbardhigo deg deg ah oo dhan 4 habab abuuro hayaan qoraalada iPhone
Haddii aad tahay phone user smart, waxaa jira fursad ah in aad ku tiirsan aad telefoon u hayo track ah oo dhan waa muhiim in aad sida qoraalo, xusuusinta, emails iwm intooda badan oo ka mid ah dadka isticmaala iPhone waxaan ku milmay ayaa iftiimiyay sida ay ku tiirsan ay yihiin qoraalada iPhone iyo sida ay jeclaan lahayd in ay sidoo abuuro gurmad ah qoraalka ay, kaliya haddii ay dhacdo, waxay ahaayeen si ay u baahan yihiin mar walba mustaqbalka.
Sidaas, halkan waxaan nahay in aad soo bandhigo sida ugu wanaagsan 4 hababka abuurista gurmad ah qoraalada iPhone iyo in sidoo kale loogu gabi ahaanba bilaash ah.
Qeybta 1 Dib ugu qoraalada ee iCloud
iCloud waa adeeg kaydinta Apple ee online daruur ku salaysan in shirkadda ayaa bilaabey in sanadka 2011. Abuuritaanka gurmad ah qoraaladaada isticmaalaya iCloud waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad ku kaydiso qoraalo muhiim ah si nabad ah oo si fudud.
Laga soo bilaabo aad screen Home, u tag Settings> iCloud> Kaydinta & kaabta ka dibna awood doorasho ee 'iCloud kaabta' .
Hubi in Notes la doorto mid ka mid ah waxyaabaha la doonayo in la xoojiyaa shaashadda iCloud. By default, dhammaan waxyaabaha laga heli karaa liiska waa in si toos ah loo hubiyaa.
Part 2 Back up qoraalada ee Gmail
In badan oo naga mid ah hore u ogaato oo ku saabsan Google nidaameed in aad ogolaanaysaa email u hagaagsan, xiriirada iyo jadwalka aad iPhone. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira wax kale oo cajiib ah in aad la qaban karto xisaabtaada Gmail; waxa kale oo aad u hagaagsan kartaa xusuusqor iPhone aad la Gmail. Bal aynu eegno sida loo sameeyo.
Tag Tag Settings> Mail, Xiriirada, Kalandarada> dar xisaabta ka dibna dooro 'Google' ee Gmail. ka dibna dooro 'Google' ee Gmail.
Hadda, magacaaga qor iyo aqoonsiga ee aad xisaabta Gmail. Marka sameeyo, si loo hubiyo in shaashadda soo socda, ikhtiyaarka 'qoraalada' waxaa lagu gagadin.
Part 3 Dib ugu qoraalada ee Lugood
Ka hor inta aadan bilaabin inaad dib u kor u isticmaalaya Lugood, waa in aad had iyo jeer si loo hubiyo in aad qabto nooca ugu dambeeya ee Lugood lagu rakibay on your computer. Waxaa laga yaabaa inaad u tagtaa caawi> Hubi Updates si loo xaqiijiyo in ka dib markii ay Lugood.
Connect iPhone la computer adiga oo isticmaalaya cable USB ka dibna lagu daahfuri Lugood.
Hubi in iCloud dhaxyada bakhtiiyey aad iPhone sida Lugood hayaan ma abuuri karaan halka iCloud yahay. Sidaas, waxaad tagtaa Settings> iCloud> Kaydinta & kaabta ka dibna furmaan 'iCloud kaabta'.
Marka kor ku xusan 2 tallaabooyinka la dhamaystiro, tag qalabka on Lugood iyo samayn click ah xaq ku yaal. Next, dhibic ka hoos menu, dooro ikhtiyaarka ah ee 'Back Up' iyo in ay tahay, in aad si guul leh ku abuuray ayaa gurmad ah ee wax walba oo ay ku jiraan qoraalada aad.
4 Qaybta kaabta qoraalada ee WordPress
WordPress waa xal kale oo lagu kaydiyo daruur oo caan ah. Dadka isticmaala WordPress, waxaa kale oo aad u fudud in la badbaadsho dhammaan qoraalada iPhone si aad u DropBox.
Ka dib marka aad xaalkaa caanka ku ah, garaac icon Share hoose ka.
On suuqa kala pop up ka, dooro Save in WordPress. Markaas waxaad fursad u heli doonaan in ay magaca caanka ku ah, xitaa ay doortaan folder halkaas oo aad jeclaan lahayd inaad badbaadin caanka ku ah.
Qeybta 5 A barbardhigo deg deg ah oo dhan 4 habab abuuro hayaan qoraalada iPhone
Dib qoraalo ee iCloud
Ugu sahlan ee hababka oo dhan, kasta u fudud in ay u hagaagsan u dhexeeya qalabka kala duwan
Waxay bixisaa ammaanka sare sida gurmad ah waa server fog; kaliya meel 5GB free
Dib ugu qoraalada ee Gmail
Ikhtiyaarka loo wanaagsan
Notes aad tirtiri karaa shil iyo weligeedba waa la sii tageen
Dib ugu qoraalada ee Lugood
In wax yar ka badan eheeyn oo ka mid ah saddex dariiqo oo
Iyadoo Lugood tan hayaan ee ku kaydsan yihiin degaanka, waxaad ku taagan tahay fursad aad u yar oo iyaga laga badiyay
Kaabta qoraalada ee WordPress
Hab fudud ee .Wadashaqayntaas file; taageero file-wadaaga; oggolaadaan in files tirtiray
Meel 2GB kaydinta lacag la'aan ah Kaliya
> Resource > iPhone > 4 Hababka Free in kaabta iPhone aad Notes